Angiyithandi! | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoMashi 14, 2012 NgoLwesithathu, ngoMashi 14, 2012 Douglas Karr
Lawa amagama angama-4 amabi kakhulu ongawezwa njenge-ejensi evela kwiklayenti lakho. Awusoze wakujwayela yize kwenzeka ngokujwayelekile. Abantu baqasha abaklami ukwenza le kungenzeki… Donsela umbono ngaphandle kwamakhanda abo bese ukuwufaka emfanekisweni, kusayithi, kuvidiyo noma kumkhiqizo.
Okubi kakhulu, akuvamile ukuthi impendulo ibaluleke. Akunandaba ukuthi uyayithanda noma cha. Inqobo nje uma idizayini ingeke ilimaze umkhiqizo wakho futhi yakhelwe ngobungcweti, udinga ukugwinya ukuziqhenya kwakho - nombono wakho - bese ubona ukuthi kwenzekani. Abaqambi bayiqembu elingakholeki… nsuku zonke babhekene nokungabi namsebenzi okwengeziwe kunamahlaya wokumisa ajwayelekile. Ngokungafani namahlaya, umklami kufanele acele impendulo (aka heling).
Nawa amanye amathiphu wokukusiza ubhekane nokuvumela ukwakhiwa komklami:
Umcabango wakho ungakwenza ungalokothi zenziwe kabusha emhlabeni wangempela ngokunembile. Njalo.
Ungu hhayi umklami. Kungenzeka, kunjalo do wazi okungcono.
Idizayini hhayi kwakho. Idizayini ezilalelini zakho.
Umklami omkhulu uzosebenza kanzima ukuhlangabezana nezinhloso zomklamo ngenkathi ejabulisa izicelo zakho nempendulo… hhayi ukuklama kuzicelo zakho.
Ukunikezela umklami wakho nge Inkululeko ukudala kahle kuzoletha okukhipha okuhle kakhulu.
Gxila kumiphumela yedizayini, hhayi ukwakheka uqobo, ukukala impumelelo yayo.
Uma usindwe kanzima ekufakweni komklamo futhi kungasebenzi, ungamsoli umqambi.
Njengosomabhizinisi, uvame ukucabanga ukuthi wazi kangcono. Uma uphumelele, kwesinye isikhathi kunzima kakhulu ukuphuma endleleni bese uvumela umklami wakho ukuthi asebenze. Njengoba sithuthukisa i-infographics namasayithi, imvamisa angikuthandi okwenziwe… kodwa futhi ngithobekile ngokuthi uma ngingena endleleni esikhundleni ukuphuma endleleni, imiklamo iyahluleka.
Abaqambi abakhulu babuza amathani emibuzo futhi bangahle banikele nangesibonelo esithile, okusalungiswa nokuphindaphindwa kwempendulo yakho. Angizami ukukhuluma nawe ukuthi utshale imali kumklamo owudelelayo; ngemuva kwakho konke, uyayikhokhela futhi udinga ukuhlala nayo. Kepha uma kungumklamo osebenzayo futhi hhayi isitayela sakho, thatha ithuba ubone ukuthi kwenzekani!
Futhi zama ukungasho ukuthi, “Angiyithandi!”.
Tags: designumklami we-graphicumfanekisoinfographiclikedesign web
Thola Izixhumanisi Ezingenayo kalula ngeBlekko
Mar 18, 2012 ku-10: 22 AM
Angikwazanga ukuvumelana nawe ngaphezulu, uDouglas. Amaklayenti kaningi abonakala eqasha umklami ukuze iklayenti likwazi ukuzakhela ucezu lwalo, kuyilapho amakhono omklami ephonswa evuna amakhono abo e-Adobe mechanical. Amaklayenti ahluleka ukuqonda ukuthi umklami onekhono akagcini ngokwazi amathuluzi abo - bayazi futhi "ukwakhiwa," okuyingxenye enkulu yomsebenzi wabo. Ngaphezu kwalokho, amaklayenti KAKHULU akhohlwa ukuthi ukwakhelwa kwenzelwa izethameli zabo, hhayi zona.
Ngasohlangothini lwe-flip, abaklami kanye / noma abaphathi bephrojekthi kudingeka baqiniseke ukuthi bafanelekela amaklayenti abo futhi babonisane nabo ngangokunokwenzeka. Amaklayenti awazi njalo ukuthi angazichaza kanjani izinhloso zawo, ngakho-ke ukuxhumana okunekhono namakhasimende kuyadingeka. Futhi, “abaklami” abaningi bayaluphuthelwa uphawu, noma akusikho abakushoyo, futhi abakwazi ukuklama isiqeshana esibukeka kahle esigcwalisa injongo yanoma iyiphi iklayenti, kungakhathalekile ukuthi ivezwe kahle kangakanani. Ngicabanga ukuthi amanye amaklayenti kungenzeka akhathele yilokhu, futhi.
Mar 18, 2012 ku-12: 43 PM
Awulona ikhasimende lakho.
Uma ungayithandi, pho?
Kunzima ukwamukela — kodwa kuyiqiniso!
Ukusingathwa Okuhamba phambili
Mar 19, 2012 ku-6: 31 AM
Yebo, ikhasimende liya njalo lapho lithola khona izisekelo futhi ngiyaqiniseka ukuthi wonke umuntu uyakwazi lokhu. Kepha kwesinye isikhathi siyavumelana namakhasimende ngaphandle kokuthola ipeni elilodwa. Njengami “iTrust” igama elibalulekile ebhizinisini.
Mar 22, 2012 ku-12: 26 PM
Angikutsheli ukuthi kukangaki ngemuva kokubona okuthile engikubuza ngale tweak noma leyo tweak noma umcabango ongemuva kwayo kuphela ukuthola impendulo efana nokuthi "Ngizamile lokho vele" "Akusebenzi ngoba" futhi kwesinye isikhathi bekuhlinzekwa ngaso leso sikhathi isibonelo esisindisiwe salokhu engikushilo ukuze ngizibonele. Ngemuva kwalezi zicelo ezimbalwa maqondana namaphrojekthi ahlukahlukene ngiye ngaqala ukungabe ngisabuza izinto ngoba ekugcineni bazi kangcono kakhulu.
Futhi i-Id engeza umgodi wejuba lomklami wakho noma iqembu lokudala ngokungabaniki izinketho ezanele noma impendulo phambili.